नागरिकलाई बाहिर निस्किए कारबाही, कार्यकर्तालाई प्रदर्शन गर्न छुट! :: Setopati
नागरिकलाई बाहिर निस्किए कारबाही, कार्यकर्तालाई प्रदर्शन गर्न छुट!
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, वैशाख १७
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै प्रहरीले झन्डै १६ सय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो। केही घन्टा सडकमै उभ्याएर उनीहरूलाई छोडिदियो।
मंगलबार नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा भने फरक दृश्य देखिन्थ्यो। मानिसहरूको भीडभाड थियो, होहल्ला थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरूविरूद्ध नाराबाजी गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता बबरमहल पुगेका थिए।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण नफैलिओस् भनेर अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा पसलमा समेत भौतिक दूरी कायम गरिन्छ। तर बबरमहलमा नाराजुलुस गरिरहेका अनेरास्ववियुका कार्यकर्तालाई प्रहरीले तितरबितर पारेन, उल्टै सुरक्षा दियो।
मंगलबारै साँझ प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादीले महोत्तरीमा मसाल जुलुस निकाल्यो।
जुलुसमा सामान्य अवस्थामा जस्तै मानिसको ठेलमठेल भीड थियो। आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवले दिएको नेकपा सांसदद्वय श्रेष्ठ, महेश बस्नेत र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालविरूद्ध अपहरणको किटानी जाहेरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले नदिएको विरोधमा मसाल जुलुस गरेको हो।
हातमा मसाल बोकेका जनता समाजवादीका कार्यकर्ताले नाराबाजी पनि गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध उनीहरूले नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। लकडाउनका बेला ठेलमठेल भीड भए पनि महोत्तरी प्रहरीले हस्तक्षेप गरेन। महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा उनीहरूले मसाल जुलुस लगाएका थिए।
बुधबार नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले तनहुँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्‍यो। तनहुँबाट निर्वाचित सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसन सांसद सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ मा मुछिएको भन्दै छानविन गर्न माग राखेर तनहुँका एक सय ठाउँमा नेविसंघले प्रदर्शन गरेको हो।
लकडाउन उल्लंघन गर्ने बढे भनेर गृह मन्त्रालयले मंगलबारदेखि लकडाउन कडा पार्न निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी सवारी पास दुरूपयोग भएको भन्दै प्रहरीले बुधबार त्यस्ता अनुमति पत्र रद्द गरिदिएको छ।
विभिन्न जिल्लाबाट संघीय राजधानी काठमाडौं भित्रने मानिसको संख्या बढेपछि गृह मन्त्रालयले केही दिनदेखि थप कडाइ गरिरहेको छ।
काठमाडौंमा रहेका विपन्न वर्गका मानिसलाई घर फर्काउने तयारी गर्दै पठाइएका बस प्रहरीले बीच बाटोबाटै फर्काइदिएको छ।
मंगलबार काठमाडौं आउँदै गरेका गोरखाका विभिन्न स्थानीय तहले पठाएका बस पृथ्वीराजमार्गबाटै फर्काइएको थियो।
नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कँदा पनि कारबाही गर्ने प्रहरीले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई किन प्रदर्शन गर्न छुट दिएको? भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले प्रदर्शनबारे जानकारी नै नभएको बताए।
‘कहाँ-कहाँ प्रदर्शन भएका छन् हामी खोज्छौं, अहिले प्रदर्शन गर्न मिल्ने बेला पनि छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १७, २०७७, ०४:४५:००